अब विदेशमा कमाएको पैसा सञ्चय कोषमा जम्मा हुने ! - Arthatantra.com
काठमाण्डौं । नेपालीहरुले विदेशी भूमिमा गएर दिनरात पसिना बगाई कमाएको पैसा उनीहरुको घर खर्च र अन्य काममा मात्र खर्च हुन्छ तर जब उनीहरु विदेशबाट फर्किन्छन् तब रित्तो हात हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यो अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै अब उनीहरुको पैसा सञ्चय कोषमा सञ्चित व्यवस्था हुने भएकोछ ।
सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषले विदेशमा कमाएको पैसा बचत गराउने तयारी सुरु गरेका छ । जसका लागि संसदमा कर्मचारी संचय कोष ऐन-२०१९ को संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको छ र, कोषले विदेशमा रहेका कामदारले कामएको निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरी अध्ययन अघि बढाएको छ ।
यसका लागि पहिलो चरणमा कोरिया गएका कामदारको रकम कोष अन्तरगत जम्मा गर्नेबारे छलफल अघि बढेको छ । संशोधन विधेयक पास भए लगत्तै विदेश जाने कामदारको रकम पनि जम्मा गर्न बाटो खोल्ने भएकाले त्यसको सुरुवात गरिहाल्न कोरियालाई रोजिएको कोषले बताएको छ ।
यसका लागि कोरियाको नेशनल पेन्सन काउन्सिल (एनपीसी)सँग समन्वय गर्ने तयारी छ, जसले कोरियामा कामदारको सामाजिक सुरक्षा हेर्छ । यसका लागि अध्ययन सुरु गरिएको छ ।
३० जेठ २०७३, ४।००
वि.सं.२०७३ जेठ ३० आइतवार १६:४३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशन चैत २३ देखि !
पछिल्लाे जनता बैंकले पनि ल्यायो ५० प्रतिशत सेयर, हिजो भयो निर्णय !